MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: ရေးချင်ရာရေး မတုန်လှုပ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာနှင့် ပါတီတွင်း သမ္မတလောင်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ရတော့မည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ရေးချင်ရာရေး မတုန်လှုပ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာနှင့် ပါတီတွင်း သမ္မတလောင်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ရတော့မည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ရေးချင်ရာရေး မတုန်လှုပ် သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာနှင့် ပါတီတွင်း သမ္မတလောင်း ရွေးကောက် ပွဲ လုပ်ရတော့ မည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
တစ်ချိန်က ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးသိန်းစိန်(ယခုအနားယူနေပြီး)ပြောကြား ခဲ့သလို ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင် မြှောက်ကြမည့် ပါတီမှ ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်သကဲ့သို့ ၂၀၁၅တွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ပါတီတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရတော့မည်လောဟု ထင်မြင် . . . စစ်အလေ့အထရောဂါ၊ အာဏာငမ်းရူး ရောဂါ၊ အချောင်သမားရောဂါ၊ သူလျှို၊ ဒလန်ရောဂါ၊ အကျင့်ပျက် ရောဂါ တည်းဟူသော သူငယ်နာ (၅)မျိုး စွဲကပ်နေခြင်း …””စသည်ဖြင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအပေါ် သုံးသပ် . . .
““ပြည်သူတို့နှင့် ရင်ခုန်သံ ထပ်တူညီသည့် ပါတီ””ဟု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းတွင် အတိအလင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ပြောကြားထားသည်။ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကျင့်သုံးလျက် ရှိကြောင်း ပါတီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့မှ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်း က အတိအလင်း ပြောကြားထားသည်။ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် တည်ထောင်သူ ပုဂ်္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သော ပြည် ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ဦးသိန်းစိန် (ထိုစဉ်က ပြန်ကြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး)နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ဌာနချုပ်ရုံး အပေါ်ထပ် ၎င်း၏ ရုံးခန်းတွင် တွေ့ဆုံ၍ အသင်းကြီး၌ ကိုယ်ကျိုးရှာသူများ၊ အနားပျာများ၏ ပြဿနာများ ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က မိန့်ကြားချက် တစ်ခု အမှတ်ရမိ ပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်က ““ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ရလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအခါ ပါတီဝင်များ၏ မဲဆန္ဒဖြင့် ပါတီ ကေဒါများ၊ ရပ်ကျေး၊ မြို့နယ် ကော်မတီများကို ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များက ခရိုင်နှင့် တိုင်း/ပြည်နယ် ကော်မတီများကို ထပ်မံ မဲပေး ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ မဲဆန္ဒဖြင့်သာ အတွင်းရေးမှူး၊ ဥက္ကဋ္ဌများကို ရွေးချယ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအခါ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်အများ သဘောတူ၊ လူထု ခေါင်းဆောင်များဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုး၊ နိုင်ငံအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိ အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက် လေးရပ်၊ စီးပွားရေး ဦးတည်ချက် လေးရပ်၊ လူမှုရေး ဦးတည်ချက် လေးရပ်၊ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါး တို့ကအစ ရေးသား ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း””စသည်ဖြင့် ပြောကြား ခဲ့သည်။ …
မင်းဆိုး၊ မင်းညစ် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ကြပ်ပြေးနန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံ၊ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုစသော စာအုပ်များဖြင့် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်ရေးသား ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုများ၊ ဒီလှိုင်းစာစောင်တွင် ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို သေမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်၊ စက္ကူကျားကြီး ဦးသန်းရွှေ ဟူ၍ ရေးသားချက်များ စသည့် ပုဂ်္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ရှုတ်ချရေးသား ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုများအပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ငြိမ်း)က မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ တရားစွဲခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ပြစ်တင်ခြင်း …. ဘာတစ်ခုမျှ မလုပ်ဆောင်ဘဲ ရှိနေသော်လည်း သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးအနေဖြင့်လည်း စာနယ်ဇင်းများအပေါ် မကြည်လင်သော သဘော ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့ခြင်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတစ်ဦး အနေဖြင့်လည်း စာနယ်ဇင်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်သည်ဟူ၍ တရားစွဲအရေး ယူရန် တင်ပြခဲ့…
ယခုအခါ လွှတ်တော်များ အတွင်း ကိုယ်စားလှယ် အများစု ရရှိထားသော ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အာဏာ ရပါတီမှ ၂၀၁၅တွင် ရွေးကောက်ပွဲ၌ သမ္မတလောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ယူထားသူ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက အတိအလင်း ပြောကြား နေသည်။ ပါတီ ဗဟို ကော်မတီနှင့် နီးစပ်သူများ ကလည်း သူရဦးရွှေမန်းကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ထောက်ခံ နေကြသည်။ သို့သော်လည်း ပါတီတစ်ခုတွင် သမ္မတလောင်း တစ်ဦး ရှိရမည့် အစား လက်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ပြန်လည်၍ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ၂၀၁၅တွင် ရွေးချယ်ခံ မခံ၊ မရေမရာ ဖြစ်နေ ပြန်သည်။
စာနယ်ဇင်း အချို့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက် ပြန်လည်၍ ရွေးချယ်ခံ၊ မခံစဉ်းစား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ သလို သမ္မတပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်မှ တစ်ဆင့်လည်း ၂၀၁၅တွင် သမ္မတလောင်း အဖြစ် ဦးသိန်းစိန် ပြန်လည် ရွေးချယ်ခံ၊ မခံမရေမရာ ပြောကြားလျက် ရှိသည်။ ပြောကြားချက် များကို လေ့လာ ကြည့်ပါလျှင် အများပြည် သူယုံကြည် ဖွယ်ရာရှိသည့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ခေါင်းဆောင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ““နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီး ဦးသိန်းစိန်ဟာ လာမယ့်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သက်တမ်းမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ နေရာကို အရွေးချယ် မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းသည် မိမိတို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ဒီလိုပဲ ပြောဆိုတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ၀န်ကြီးများကို ပြောတဲ့ စကားဟာ အင်မတန်မှ တည်ကြည်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နောင်၂၀၁၅ သက်တမ်းမှာ လက်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သည် ၀င်ရောက် အရွေးမခံဘူး ဆိုတဲ့ မိမိကို ပြောကြားတဲ့ စကားဟာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်”” ဟူ၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ၂၀၁၅တွင် ပြန်လည် အရွေးခံတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း မီဒီ ယာများကို အတိအလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အတူပင် မိမိအနေဖြင့်လည်း သမ္မတ တာဝန်ယူ၍ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်စီမံရန် အသင့်ရှိကြောင်းလည်း သူရဦးရွှေမန်း က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ သေးသည်။ ဤသို့ ဆိုပါလျှင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ သမ္မတလောင်း အဖြစ် မည်သူ ဖြစ်လာမည်နည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေပါသည်။ စာဖတ်သူများ အနေဖြင့်နား၊ မျက်စိ လည်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်က ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးသိန်းစိန် (ယခု အနားယူ နေပြီး)ပြောကြား ခဲ့သလို ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြမည့် ပါတီမှ ခေါင်းဆောင်များ ကို ရွေးချယ် သကဲ့သို့ ၂၀၁၅တွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ သမ္မတလောင်းအဖြစ် ပါတီတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ ရတော့မည်လောဟု ထင်မြင်မိ နေပြန်ပါသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီတွင် မကြာသေးမီက ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ပြဿနာလည်း ရှင်းနေရပြန် ပါသည်။ လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်က မေးမြန်း၍ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးလာရောက် ဖြေကြားရာတွင် တိကျသောအဖြေကို ပြည်သူများက မသိရှိကြပါ။ သတင်းဂျာနယ် အချို့တွင် လက်ရှိပါတီ ဥက္ကဋ္ဌသည် သူရဦးရွှေမန်း ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ရေးကြပြန်ပါသည်။ ရေးသား ချက်မှာ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဦးစိုးမောင် ဖြေကြားချက်အရ ရေးခြင်းဖြစ်ကြသည်။ သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီးသည် လွှတ်တော်တွင် အဆိုပါ ဖြေကြားမှု၌ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ညှပ်၍ ထည့်သွင်း ဖြေကြားခဲ့ရာ ဘာသာပြန်အရ လိုသလို ဆွဲ၍ ပြန်ကြမည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ရိုးသားသော၊ ဖြူစင်သော ကျေးလက်နေ အများ စုဖြစ်သော လက်လုပ် လက်စား အခြေခံ လူတန်းစား ပြည်သူတို့မှာ အင်္ဂလိပ်လို ဖြေကြားသည့် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး၏ ဥပဒေ စကားများကို နားမလည် နိုင်ကြပါ။ မိမိတို့၏ ကိုယ်စားလှယ် အမတ် မင်းများကိုသာ အားကိုးတကြီး ကြည့်နေကြရသော ဘ၀ဖြစ် ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ် အမတ်မင်းများ ကလည်း မရှင်းမရှင်း မျှသာ ပြန်လည် ပြောနိုင်ကြသည်။
စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည် ဆိုသည်နှင့် ပုဂ်္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်မှုများ ပြုလုပ် နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင် စီ(ယာယီ)နှင့် အစိုးရပိုင်းမှ သမ္မတကြီးကိုယ် တိုင်ပင် မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်း ပြောရသည် အထိပြော လာသည်။ စာနယ်ဇင်းများ ကလည်း တိုင်းပြည်၏ ကျက်သရေ၊ တိုင်းပြည်၏ မျက်နှာစာ၊ ပြည်သူများ၏ ဘ၀ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အစိုးရမင်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို မြင်လျှင် မြင်သည့် အတိုင်း၊ ကြားလျှင် ကြားသည့် အတိုင်း၊ သိလျှင် သိသည့် အတိုင်း၊ ရေးသားရဲသော သတိ်္တမည်မျှ ရှိကြ ပါသနည်း။ စာနယ်ဇင်းများတွင် ရေရောထားသော သဘောဟူ၍ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်က ပြောကြားခဲ့သလို သတင်းစာနှင့် သတင်းဂျာနယ် များ၌လည်း အစိုးရနှင့် ပုလင်းတူ ဘူးဆို့ ဖြစ်ပြီး အစိုးရ ကောင်းကြောင်း သာရေး၊ အစိုးရ မကောင်းကြောင်း မရေးသည့်မူ၊ ဘယ်ဘက်မှ မလိုက် ကြားနေ၀ါဒ၊ အစိုးရ အားကောင်းလျှင် အစိုးရဘက်လိုက်၊ ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်စုများ အားကောင်းလျှင် ဒီမိုကရက်တစ် အုပ်များ ဘက်လိုက် (ဆိတ်လစေ့ မူဝါဒ) မူများဖြင့် ရပ်တည် လျက်ရှိသော စာနယ်ဇင်းများကြောင့် ပြည်သူများ လည်း နစ်နာ နေရပါသည်။ ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံ ဟူ၍ မှန်ကန်သော အားကိုးမှုများ ၂၀၁၅မတိုင်မီ ပေါ်ပေါက် စေချင် လှပါသည်။
မျက်မှောက် အခြေအနေမှာ နှစ်ပေါင်း များစွာ ဗဟိုဦးစီး စနစ်၊ တစ်ပါတီ စနစ်၊ အာဏာရှင် စနစ်၊ စစ်အစိုးရ စနစ်၊ တစ် ဗိုလ်တစ်မင်း ၀ါဒ ထွန်းကား ခဲ့သည်ဖြစ်၍ အကြောက်တရားများ အမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီး မည်သည့် ကိစ္စမဆို လမ်းဘေးတွင် အများပြည်သူ ပလက်ဖောင်း ပေါ်၌ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများပေါ် လစ်သုတ်နေ သည်ကိုပင်လျှင် ဂျာနယ်စာမျက်နှာပေါ် ထည့်သွင်းရန် သင့်၊ မသင့် စိစစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သတင်း အမှန် ရိုက်ကူးလာသော မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ ကိုပင်လျှင် ကင်မရာမှ ထွက်သော မူရင်း ဓာတ်ပုံဆိုဒ် ထည့်၍မရ၊ မည်သည့်ဆိုက် အရွယ်အစားသာ ဖော်ပြပါ၊ ကာလာ မသုံးရ၊ အဖြူအမည်းသာ သုံးပါ၊ မျက်နှာဖုံး မတင်ရ၊ အတွင်း စာမျက်နှာသာ ထည့်ပါ ….စသော အကြီးအကျယ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များဖြင့် ဖိနှိပ်ခဲ့သော စာပေ စိစစ်ရေးရုံးမှ အရာရှိကြီးများ၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သော ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီကို သမ္မတက ဖွဲ့စည်း ပေးလိုက်ခြင်းမှာ ပြည်သူများ အကျိုးထက် မည်သူများ အကျိုးအတွက် ဖြစ်မည် ဆိုသည်ကို စဉ်းစားလျှင် သိရှိမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ကြရသော ““မင်းတို့ ဒါတွေက သတင်းရေးစရာ မလိုဘူး၊ ကြားလား””ဟူ၍ လာရောက် ဆွေးနွေး မေးမြန်းမှုကို ခံယူခဲ့သော မြန်မာသံတော်ဆင့် အယ်ဒီတာ များကို ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောခဲ့သည်မှာ အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ (ယာယီ)မှ လူကြီးမင်း အချို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍လည်း သတင်းသမားကို သတင်းမရေးရန် တားမြစ်သည်မှာ မသင့်လျော်ကြောင်း မိမိတို့ သတင်းစာမျက်နှာ မှပင် ပြန်လည် ရေးသား ထောက်ပြခဲ့ရ ပါသည်။
ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးများသည် အငြိမ်းစား လောကတွင် ဒုနှင့်ဒေး ရှိပါသည်။ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သော အဆိုပါ လူကြီးမင်းများကို သမ္မတရုံးက ခေါ်ယူသည် ဆိုပါလျှင် အချိန်မရွေး ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး လာချင်ကြ သူများချည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ စာနယ် ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) ဆိုသည်မှာလည်း အချိန်မရွေး ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သတင်းဌာန တစ်ခု၊ သတင်းဂျာနယ် တစ်ခု၊ လူထု ထောက်ခံမှု ဖြင့် မိမိတို့ကိုယ် ပိုင်ရှာဖွေ စုဆောင်း အပ်သော ချွေးနဲစာ များဖြင့် လပိုင်း၊ နှစ်ပိုင်းအတွင်း အောင်မြင်ဖို့ ဆိုရန်မှာ လွယ်ကူသော အလုပ် မဟုတ်ပါ။ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်အား အကြီးမားဆုံး၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်လည်း အသင်းဝင် အများဆုံးဟု ဆိုနိုင်သည့် အသင်းဝင် (၂၄) သန်း ရှိသည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုရေး အသင်းမှ ထုတ်ဝေသော သတင်းဂျာနယ် များဖြစ်သည့် ရွှေနိုင်ငံ၊ စိမ်းလဲ့ ရွှေပြည်၊ နွယ်သာကီ၊ The Live News ဂျာနယ်များ စာဖတ် သူများ အားပေးမှု မရှိ၍ ယခုအခါ ရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းနှင့် ပါတီတွင်း၌ပင် အလုပ်အမှု ဆောင်များ အစုံအလင်ပင် မဖတ်ရှုဘဲ စတို၌သာ နှစ်ပေါက်အောင် သိမ်းထားသောနေရာ များလည်းရှိ ပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့မှ အချိန်မီ မပြောင်းလဲနိုင် ခဲ့၍သာ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရကြောင်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့် ထိုစဉ်က ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး အပါအ၀င် ဌာနတာဝန် ရှိသူအချို့ ခွင့်ပြု မှသာ ထုတ်ဝေခွင့်ရခြင်း၊ သို့အတွက်ကြောင့် အချိန်မီ မထုတ်ဝေနိုင်ဘဲ ထွက်ရက်များ နောက်ကျခြင်း စသည် စသည် များကြောင့် ဖြစ်ရကြောင်း သိရှိခဲ့ ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းဂျာနယ် တစ်စောင် ပြည်သူလူထု အားပေးမှု အမှန် တကယ်ရရန် မလွယ်သည်မှာ ငြင်း၍ မရပေ။ ပြည်သူတို့၏ ရင်မှ ခံစားချက်များ၊ အောက်ခြေတွင် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများကို ဖော်ပြ၍ သတင်းဂျာနယ် အောင်မြင် လာသည် ဆို သည်မှာ ပြည်သူတို့၏ အသက်၊ သွေး၊ ချွေး နစ်နာမှုများ ရင်းနှီး၍ ရလာသော အောင်မြင်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီကို လိုလားသော အစိုးရမှန်ပါလျှင် ဤသို့ သဘောကို စောကြောရန်မလိုဘဲ လက်ခံ ရမည်သာဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ အစိုးရသည် ကြံ့ခိုင်ရေး အစိုးရပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်၍ အာဏာကို အပ်နှင်း ခဲ့သည်မှာ တစ်ချိန်က အနှစ်၂၀ကျော် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများကို သတင်းထုတ် ပြန်ခြင်း မပြုသော နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေး(၂၀၁၀)၌ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက နိုင်ငံတော်အလံကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်၍ နိုင်ငံတော်အေး ချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ တစ်ဖွဲ့လုံး အနားယူခဲ့ခြင်းမှာ နိုင်ငံတော် အာဏာကို ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီသို့ လွှဲအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့သူ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်သောင်းက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ အတိအလင်း ပြောကြား ထားခဲ့သည်။ လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် များနှင့် လွှတ်တော် အကြီးအကဲများ၊ ယုံကြည်အားကိုး လေးစား ကြောက်ရွံ့ နေသည်ဟု ဆိုရလောက်သည့် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ယုံကြည်ချက်များကို အစိုးရနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ဖော်ဆောင်ပေး နိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ မကြာမီ အဖြေပေါ်တော့ မည်ဖြစ် ပေသည်။ မောင်ရေစက်သည် တစ်ချိန်က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းကြီး၏ အမာခံ၊ ကေဒါ၊ အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခု အချိန်တွင်လည်း အသင်းကြီး၏ အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူလျက် ရှိပါသည်။ ပါတီသို့ ဆက်လက်၍ လိုက်ပါ ခြင်း မပြုတော့ သော်လည်း ၎င်းပါတီမှ ပုဂ်္ဂိုလ်များ ဖျက်သိမ်းရက်သည့် အသင်းကြီးကို မိမိ၏ စိတ်ထဲ အမြဲရှင်သန် နေသည်ဟု ယူဆထားသူ၊ အသင်းကြီး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အဓိဋ္ဌာန်ကို ယနေ့တိုင် ယုံ ကြည်လျက် ရှိနေသူအဖြစ် ခံယူထားပါသည်။ အကျင့်ပျက် ခြစားနေခဲ့သော အသင်း ကြီး၏ အောက်ခြေ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ဗဟိုမှ တာဝန်ရှိသူများကို ပါတီဗဟို အတိုင်ပင်ခံ ဦးတင်ထွတ်က ““ ပါတီဝင်များတွင် အာဏာငမ်း ဖမ်းနေသူများ၊ နေရာ လိုချင်သူများ၊ ထင်ပေါ်လို သူများ၊ ပြည်သူက အမြင်မကြည်လင် သူများ စသည်တို့ ရောထွေး ပါဝင်လာပြီး ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက် ခိုင်မာမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာမြို့နယ် တစ်မြို့နယ်တွင် ပါတီဝင်အင်အား ၅၀၀၀၀ ကျော်ရှိသော်လည်း၊ မိမိ ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် ၄၀၀၀ ကျော်သာ ရှိပြီး ကျန်ပါတီဝင်များ အခြားပါတီသို့မဲပေး သည်ကို တွေ့ရသည်။
- ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စည်းရုံး ရေး အရည်အချင်း အားနည်းခြင်း၊
- ပါတီကေဒါနှင့် မတူဘဲ လခစား၊ ၀န်ထမ်းဆန်ဆန် ပြုမူလုပ်ကိုင်ခြင်း၊
(ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် ကုန်ကျ စရိတ်မရလျှင် မည်သည့် အလုပ်မျှ မလုပ်ပါ)
- မူဝါဒအပေါ် ယုံကြည်ချက် အားနည်းခြင်း၊
- စစ်အလေ့အထ ရောဂါ၊ အာဏာငမ်းရူး ရောဂါ၊ အချောင်သမား ရောဂါ၊ သူလျှို၊ ဒလန်ရောဂါ၊ အကျင့်ပျက် ရောဂါ တည်းဟူသော သူငယ်နာ (၅)မျိုး စွဲကပ်နေခြင်း …””စသည်ဖြင့် ၂၀၁၂ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲ၌ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရခြင်း အပေါ် သုံးသပ် ရေးသား ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းကိုရော ပါတီကိုရော ဝေဖန်မှုတွေ ပုတ်ခတ်မှုတွေလည်း အများကြီးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်း သဘာဝ ကျပါတယ် . . .
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် လာရောက်ဖြေကြားသော ပညာရေး ဒုဝန်ကြီးကို လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က အလွတ်ကျက်၍ လာဖြေကြောင်း၊ ပညာရေစနစ်ညံ့ဖျင်းနေကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့၍ နာမည်ကြီးသွား ပြန်ရာ အစိုးရ သတင်းစာမှလည်း ဓမ္မသံတော်ဆင့်မှ ထုတ်ဝေသော “မြန်မာ့လွှတ်တော် ပုံရိပ်” စာအုပ်ကြော်ငြာ စာသားများတွင် ဦးခင်အောင်မြင့် အမည်ကိုပါ ဆင်ဆာဖြတ် လိုက်ခြင်းဖြင့် အစိုးရနှင့် လွှတ်တော် စစ်အေးတိုက်ပွဲကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်လိုက်ရ . . .
ဗဟို အတိုင်ပင်ခံ ဦးတင်ထွတ်၏ ပြောကြားချက်အရ ထိုကဲ့သို့ သုံးသပ်ချက်ကို ရေးသား တင်ပြရန် တောင်းခဲ့သည်မှာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဖွဲ့လုံး ဖြစ်ကြောင်း သို့သော်လည်း မိမိတစ်ဦးသာ ရေးသား တင်ပြ ခဲ့ကြောင်း၊ တခြား ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်များ ရေးသားမည်ဟု ထင်သော်လည်း မရေးသား ခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ဥက္ကဋ္ဌကြီး သူရဦးရွှေမန်းက တစ်စောင်တည်းသော သုံးသပ်ချက်ကို အကောင်းဆုံးဟူ၍ မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပြီး၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် သမ္မတကြီးကတော် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း တို့ကပါ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အတွက် အလွန်ကောင်းသော သုံးသပ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဗဟို အတိုင်ပင်ခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်သောင်းနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်က ယနေ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၌ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေသည်မှာ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတို့တွင် အစီအမံများ (လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်) ချ မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ပီအာရ်စနစ်ကိုလည်း လေ့လာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့၍ ဦးအောင်သောင်းကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည်လောဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ နားတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူမှုရေးများသာ ကူညီ ဆောင်ရွက်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးတင် ထွတ်ကလည်း ဇလွန်ခရီးစဉ် တစ်ခုတွင် ၂၀၁၅၌ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်တော့ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ဤသို့ဆိုပါလျှင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်များနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်များမှ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေး သမားကြီးများ (ဆရာကြီးများ) အဖြစ်အားကိုး အားထားပြု နေသူ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ နှစ်ဦးကလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုစွန့်ခွာ၍ အနားယူတော့ မည်ဟု ယူဆရမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထိုအခြင်းအရာ များသည် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ၏ ပါတီသက်တမ်းမှာ (၃)နှစ်ကျော် သာရှိသေးသည့် ကာလ (အသင်းကြီး သက်တမ်းမပါ) အတွင်း ပါတီလူကြီးများက အသက်အရွယ် အရ ပါတီကို စွန့်ခွာသည် ဟု ပြောနေ စေကာမူ နိုင်ငံရေး လောကတွင် ကျင်လည် သူတိုင်း၊ နိုင်ငံရေး နားလည် သူတိုင်း၏ သုံးသပ်ချက်မှာ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ် နိုင်ကြောင်းလည်း လေ့လာ စဉ်းစား နိုင်ပါသည်။ ပါတီတွင် ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှသည် ဗဟို ဦးစီးစနစ်တွင်ကြီး ထွန်းကားခဲ့သော သဘောသဘာဝနှင့် ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီစနစ် မကျင့်သုံး နိုင်သေးသော အခြေအနေတို့မှာ ယခု ၂၀၁၅ သမ္မတ လောင်းအဖြစ် မည်သူ့ကို မည်ကဲ့သို့ ပုံစံဖြင့် ရွေးချယ် ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဆိုသော အကြောင်းတရားက သက်သေ ထူမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပါတီသက်တမ်း နှစ်ပေါင်း(၂၀) ကျော်၌လည်း ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ပြည့်ဝမှု အားနည်းလျက် ရှိသေးကြောင်း ပါတီ အစည်းအဝေးများနှင့် ကန့်ကွက်မှုများ သတင်း ထွက်ပေါ်နေမှုအပေါ် သိရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ သမ္မတလောင်း ဦးသိန်းစိန်လော၊ သူရ ဦးရွှေမန်းလော၊ အမည်မသိ ဖြစ်နေချိန်တွင် NLD ပါတီဝင်များက မိမိတို့ပါတီ သမ္မတလောင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း ပြောနေ ကြသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဗဟို ကော်မတီ ၀င် အချို့နှင့် တွေ့စဉ်က သူရဦးရွှေမန်း သမ္မတလောင်း ရွေးမည်ဆိုလျှင် ထောက်ခံမည်ဟု ပြောကြသလို၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က သမ္မတလောင်း ရွေးမည်ဆိုလျှင်ကောဟု မေးမြန်းသည့်အခါ ဆိတ်ဆိတ်နေကြ ပြန်သည်။ သူတို့တွင် ပြောစရာစကား မရှိပါ။ လူကြီး (လက်ရှိပါတီ အကြီးအကဲ) အကြိုက် လိုက်ရမည်ကို နားလည်မိ ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်ပေါ်စေလိုသော ဆန္ဒရှိမည်ဟု ယူဆပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်အား အကြီးမားဆုံး ပါတီကြီးနှစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် NLD ပါတီ ဖြစ်ပါ သည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၎င်းတို့ပါတီများမှ တစ်ပြေးနေသည် ဆိုပါလျှင် တိကျသော သမ္မတ လောင်းများ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက် ထွက်သင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ NLD မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ လောင်း အဖြစ် သေချာသည်ဟု ပြောနေသော်လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ပြော၍ မရသေး သည့်သဘော ဖြစ်နေသည်မှာ ပြည်သူ များကိုယ်စား ပါတီတွင်း သမ္မတလောင်း ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျ ကျင်းပပေးပါ ဟူ၍ ပြောလိုပါသည်။
သေချာသည်မှာ ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်သော သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် ပြည်သူတို့ ၏နား၊ မျက်စိ စာနယ်ဇင်းများ အပေါ် အမြင်မှန်ဖြင့် ဆက်ဆံရေး လိုအပ် နေသည် ဟုယူဆပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးများ၏ ပြောဆို လုပ်ဆောင်မှု များသည် သမ္မတကြီး၏ သဘောထားကို ထင်ဟပ် နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်က အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ယခုခေတ် စာနယ်ဇင်းများ လွတ်လပ်၍ ရေးသားထုတ် ဝေနေမှုများအပေါ် သီးခံ ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေး လျက်ရှိသော သဘောထားကို တွေ့နေရပါသည်။ မင်းဆိုး၊ မင်းညစ် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ကြပ်ပြေးနန်းတွင်း အရှုပ်တော်ပုံ၊ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု စသော စာအုပ်များဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်ရေးသား ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုများ၊ ဒီလှိုင်း စာစောင်တွင် ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို သေမှာ စောင့် ကြည့်နေတယ်၊ စက္ကူ ကျားကြီး ဦးသန်းရွှေ ဟူ၍ ရေးသားချက်များ …..စသည့် ပုဂ်္ဂိုလ်ရေး တိုက်ရိုက် ဝေဖန်ရှုတ်ချ ရေးသားထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိမှုများအပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း)က မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ တရားစွဲခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ပြစ်တင်ခြင်း …. ဘာတစ်ခုမျှ မလုပ်ဆောင်ဘဲ ရှိနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့သော အခြေအနေတွင် လက်ရှိ အစိုးရ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ တပည့် များ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်၍ စာနယ်ဇင်းများ အပေါ် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်အရ ရေးသား ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုများ လက်ခံပေး သင့်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း သမ္မတ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး အနေဖြင့်လည်း စာနယ်ဇင်းများ အပေါ် မကြည် လင်သော သဘော ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့ခြင်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး တစ်ဦး အနေဖြင့်လည်း စာနယ်ဇင်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်သည် ဟူ၍ တရားစွဲ အရေးယူရန် တင်ပြခဲ့ခြင်း စသည်တို့မှာ လတ်တလော ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်။
သမိုင်း အမှန်ကား ဖျောက်၍ မရပေ။ စာနယ်ဇင်းများ အပေါ် ဥပေက္ခာ ပြုနေသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာကား လက်ရှိ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းတို့ အပါဝင် အစိုးရ ပိုင်း၌ တည်ရှိနေသေး ပေသည်။ ၎င်းတို့ တိုင်တည် ပြောဆိုလျက် ရှိနေကြပြန်သည်။
မြ၀တီရုပ်/သံမှ အရာခံ၊ တပ်ကြပ် ကြီးအချို့ထံမှ သိရှိရသည်မှာ ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးသိန်းဇော် (ယခုကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ) က ၈ ပေ စလောင်းများကို ကျပ် (၁၂)သိန်း (တစ်လ တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် တစ်နှစ်စာ) အခွန်ကောက်ရန် စီစဉ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက မကြိုက်၍ ပြန်ရုပ်သိမ်း ရကြောင်း၊ အချို့ စိုးရိမ်သူပြည်သူများမှာ ဆက်သွယ်ရေးသို့ ကျပ်(၁၂)သိန်း သွားရောက်ပေး ဆောင်ခဲ့ကြ သေးကြောင်း၊ မြန်မာ့သတင်းများကို ကမ္ဘာအနှံ့ ပြန့်နှံ့ရန် အတွက် ၂ပေ စလောင်း (ကေယူ) များကို တပ်ဆင်ရန် လမ်းညွှန်ကြောင်း၊ ၈ပေစလောင်းမှာ အရှေ့တောင်အာရှ တစ်ဝိုက်သာ ရကြောင်း၊ ၂ပေစလောင်းမှာ အနောက်ဥရောပအထိ ပျံ့နှံ့ကြောင်း၊ မြန်မာ့သတင်းများကို အရှိ အတိုင်း အနောက် ကမ္ဘာအထိ ပျံ့နှံ့စေလိုသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် တပ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု စကိုင်း နက်သို့ ရောင်းချ လိုက်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ယနေ့သတင်း၊ စာနယ်ဇင်း လောကကို အမှန်တကယ် လွတ်လပ် ပျံ့နှံ့ထုတ်ဝေ ဖြန်ချိစေလိုသူမှာ လက်ရှိအစိုးရကို ကျော်၍ မြင်နိုင်လေသည်။ လက်ရှိအစိုးရ သမ္မတကြီးနှင့် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး အချို့မှာမူ မီဒီယာတွေ ရေးသားချက်များ အပေါ် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပေရာ ကျွန်ုပ်တို့ သာမန် ပြည်သူများ အနေဖြင့် ခံရမည်မျှ တစ်ပါးအခြား မရှိပေ။
အာဏာရ ပါတီဖြစ်သော ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီသည်ပင်လျှင် ၂၀၁၅ သမ္မတလောင်း မည်သူမည်ဝါ အနိုင်လု ပြောဆို နေရချိန်၊ အစိုးရ၏ သတင်းစာများလည်း အစိုးရကို ဝေဖန်သော သတင်းများကို တည်းရဖြတ် ရ၊ အစိုးရအတွင်းမှ ပြန်လည် ဝေဖန်သော ၀န်ကြီး သတင်းများ ကိုလည်း ပိတ်ရ၊ ဆို့ရ ပြည်သူများ၏ သတင်းနှင့် ကြော်ငြာ များကိုလည်း ဖြတ်ရတောက်ရ၊ ပိတ်ရဆို့ ရနှင့် မူမရှိသော လောကဌာနများ ဟုပင် ပေါ်ထွန်း လာတော့သည်။ ဤသည်ကား ဒီမိုကရေ စီအစိုးရ၏ ပထမ ၃နှစ်ကျော် သက်တမ်း ကာလဖြစ်လေသည်။ ထို အထဲမှ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် လာရောက် ဖြေကြားသော ပညာရေး ဒုဝန်ကြီးကို လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က အလွတ်ကျက်၍ လာဖြေကြောင်း၊ ပညာရေးစနစ် ညံ့ဖျင်းနေကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့၍ နာမည်ကြီး သွားပြန်ရာ အစိုးရ သတင်းစာမှလည်း ဓမ္မသံတော်ဆင့်မှ ထုတ်ဝေသော “မြန်မာ့လွှတ်တော် ပုံရိပ်”စာအုပ် ကြော်ငြာ စာသားများတွင် ဦးခင်အောင်မြင့် အမည်ကိုပါ ဆင်ဆာဖြတ်လိုက် ခြင်းဖြင့် အစိုးရနှင့် လွှတ်တော် စစ်အေး တိုက်ပွဲကို မျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်။
ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားချက်များ မှာမူ အစိုးရကို လျစ်လျူရှု၍ မိမိ၏ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ရရေးကိုသာ အသားပေးပြော ကြားသွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြားချက်တွင် ““ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပေး ပါတီက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၂၀၀၈ ရေးဆွဲ တဲ့နေရာမှာရော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် ဖော်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာရော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ပါတယ်။ ပါခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းကိုရော ပါတီကိုရော ဝေဖန်မှုတွေ ပုတ်ခတ်မှု တွေလည်း အများကြီး ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်း သဘာဝ ကျပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ အကြောင်း တွေရှိမှာပါ။ အဲဒီအတွက်လည်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးပါတီဝင်တွေက ခေါင်းဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး အတွင်းမှာ အရင်တုန်းက ဗဟိုဦးစီးစနစ် ဘယ် လိုပဲ ချမှတ်၊ ချမှတ် ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နဲ့အညီ ကျင့်သုံးဖို့ အဘအနေနဲ့ တွန်းအား ပေးတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို့ ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာ မည်မျှလောက် အထိ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်များ ကျင့်သုံးနေတယ် ဆိုတာကို လာရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လာလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ အဆုံးအဖြတ်သည် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပဲ။ ဦးရွှေမန်းရဲ့ အမိန့် မဟုတ်ဘူး။ ဦးရွှေမန်း ညွှန်ကြားချက် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဦးရွှေမန်းသည် မိမိတို့ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီမှာ တင်ပြတယ်။ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင် ကော်မတီက ဆွေးနွေးတယ်။ အဲဒီက ရလိုက်တဲ့ အဖြေသည် ဆုံးဖြတ် ချက်သည် ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ ခြေအနေ ပြောရဲတယ် မိမိတို့ ပါတီရဲ့ ဒီမိုကရေ စီကျင့်စဉ် ဘယ်ပါတီနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းတာရဲတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ မိမိပါတီဝင် တွေကိုလည်းပဲ ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ ပြည်သူများနဲ့ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်တဲ့ အခါမှာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ် နည်းလမ်း များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ပြည်သူတွေကို မိမိတို့ရဲ့ အပြုအမူကြောင့် ပါတီအပေါ် အထင်အမြင် လွဲတာမျိုးတွေ မရှိစေနဲ့ ဘယ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ လူဆိုတာ မှားတတ်ကြတယ်။ လွဲတတ်ကြတယ်။ အဲဒါတွေကို သင်ခန်းစာ ယူရမယ်။ ပြုပြင်ရမယ်။ ပြောင်းလဲရမယ်။ အဲဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုတာသည် ပင်လျှင် ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီပဲ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီလုပ်လို့မရဘူး။ ဒီမိုက ရေစီသမားဆိုရင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ သမားဆိုလို့ရှိရင် လည်းပဲ တစ်ဘက်လူရဲ့ ပြောတာ ကို နားထောင် ရမယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ကိုယ်ကလည်း ပြန်ပြောရမယ်။ ပြန်ပြောပြီး တဲ့အခါမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဆိုရင် အဲဒီလို သူပြောကိုယ်ပြော၊ သူနားထောင် ကိုယ်နားထောင် အဲဒီအထဲက နေပြီးတော့ အကောင်းဆုံး အဖြေကိုရှာ၊ ရှာပြီးတဲ့အခါမှာ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ အားလုံးက right ပဲ။ ဒါကြောင့် မို့လို့ မိမိပါတီမှာ ဘာပြောထားလဲ ဆိုရင် အများစုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားလုံးက လိုက်နာရမယ်။ အနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း အားလုံးက လေးစား။ ဆုံးဖြတ်တုန်းက၊ မဲပေးတုန်းက ကျုပ်တို့က မထောက်ခံဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာဘူး လုပ်လို့ မရဘူး။ အဲဒါလည်း ဒီမိုကရေစီ။ အများစုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားလုံး က လိုက်နာရမယ်။ အဲဒီတော့ မိမိ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း လာလှည့်ပါ၊ ကြည့်ပါ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အနေနဲ့ ဘာများ လုပ်နေသလဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြောတယ် ဆိုရင် မယုံပါနဲ့ လာကြည့်ပါ၊ မေးကြည့်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီဝင်များ နဲ့လည်း ဆွေးနွေး ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ အဲဒီအတိုင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူတို့တွေ ဖောက်ပြန်တဲ့ လူတွေပဲဖြစ်ရမယ်။ ဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေလည်း ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် အရဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းနဲ့ အတူပဲ ဖောက်ပြန်တဲ့ သူတွေကို သူ့လမ်း သူသွားရမယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီမှာ တို့ပါတီ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ယုံကြည် လက်ခံပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတယ်။”” ဟု ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောကြားခဲ့သည်။
မည်သည့် ပါတီမဆို ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ရစေချင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌများ ဖြစ်သော ဦးသိန်းစိန်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့ နှစ်ဦး ၂၀၁၅ သမ္မတလောင်းများ ဖြစ်ရန် ဆန္ဒတူလာ ကြသည် ဆိုပါမူ ပါတီခေါင်းဆောင်များ အပေါ် သြဇာသက်ရောက်လျက် ရှိသည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမည်ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း) သဘောကြသူသာ ပါတီမှ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာ မည်လော၊ သို့တည်း မဟုတ် ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီအရ ပါတီတွင်း သမ္မတလောင်း ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ် လာမည်လောဟူ၍ …..။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:36 PM
အောင်ခင်မြန်မာ November 11, 2013 at 6:49 AM
ဘကြီးရွှေ၏ချစ်လှစွာသောလူရူးလေး November 12, 2013 at 9:51 PM
လိုဖြစ်နေပြီ ဘာကောင်မှလဲမဟုတ်ဘူး ဟိုလူတွေကမသိ